The 12 Brand Archetypes: Kee baad Tahay? | Martech Zone
Dhamaanteen waxaan dooneynaa taageerayaal daacad ah. Waxaan si joogto ah u raadineynaa qorshaha suuqgeynta sixirka ah ee nagu xiri doona dhagaystayaasheena isla markaana ka dhigaya wax soo saarkeena qayb aan la beddeli karin noloshooda. Waxa inta badan aanan ogaan waa in isku xirnaanta ay yihiin cilaaqaad. Haddii aadan caddeyn cidda aad tahay, qofna dan kama yeelan doono adiga. Waa muhiim inaad fahanto cidda aad tahay, iyo sida aad u bilaabi laheyd xiriirka macaamiishaada.
Waxaa jira 12 aqoonsi oo aasaasi ah — ama noocyada qadiimiga ah- sumad ayaa qaadan karta. Hoosta, waxaan burburiyey dhammaan 12 si aan kaaga caawiyo inaad fahamto halka aad ka tirsan tahay:
SIXIRIANku wuxuu riyada ka rumeeyaa - Nooca qadiimiga ah ee Magacyadu wuxuu ku saabsan yahay aragti. Magacyada sixirroolayaasha ah kuuma dhisayaan caday ka wanaagsan ama kaa caawinaya inaad gurigaaga nadaafad ka dhigato; waxay kuu keenayaan riyadaadii ugu xiisaha badnayd nolosha. Waxa ay bixiyaan waa khibrad weyn oo aan cid kale ku guuleysan karin. Sixiroole ayaa sifiican ula jaanqaadaya aasaaska uumiga si ay u abuuri karaan wax aan macquul aheyn. Disney waa saaxirad fiican. Disney aasaasiyan waa shirkad warbaahineed, laakiin iyagu way ka duwan yihiin kuwa kale. Waxay bixiyaan khibrad isbeddel leh. Waxay ku jiraan qayb iyaga u gaar ah sababtoo ah weynaanta aragtidooda. Bal ka fikir nooc kale oo dhisi kara a Boqortooyada Magic ama a Dunida Disney.
SAGE wuxuu had iyo jeer raadiyaa runta - Xikmad-yahan, xigmaddu waa furaha guusha. Wax kasta oo kale waxay labaad u yihiin raadinta aqoonta. Nooca xikmadda leh waxaa laga yaabaa inaanu dareemin diiran iyo koolkoolin. Kuuma sawirayaan adduunyo qurux badan sida Disney. Taa baddalkeeda, xikmad-yahanku wuxuu ku amrayaa ixtiraamkaaga isagoo muujinaya bilicdooda. Jaamacadda Harvard waa xikmad-yahan. Waxay ka mid yihiin jaamacadaha adduunka aad looga ixtiraamo. Ku faanista liistada ardayda kaqeybgalayaasha oo ay ku jiraan sideed madaxweyne Mareykan ah, 21 abaalmarinaha Nobel, iyo Mark Zuckerberg (nooc ka mid ah), sumadda Harvard waxay ku saabsan tahay sida ugu caqliga badan.
INNOCENT kaliya wuxuu doonayaa inuu faraxsanaado - Qofka aan waxba galabsan janada ayuu kujiraa. Qof kastaa waa xor, fadli badan, kuna faraxsan adduunka aan waxba galabsan. Summad aan waxba galabsan waligeed kuguma eedayn doono xayeysiis ama kor uga sii gudub xagga sare si ay kuu qanciso. Taabadalkeed, summad aan waxba galabsan ayaa kugu soo jiidan doonta wax aad u xoog badan: Nostalgia. Orville Redenbacher waa nooc asaasi ah oo qadiim ah. Waxay kaa iibinayaan daaweyn carruurnimo, salool, mascotorkooduna waa ayeeyo aan joojin farxadda maaddaama foorartu ay ahayd wax si aan caadi ahayn.
OUTLAW waxay rabaan kacaan - Xeer ilaaliyuhu ma cabsanayo. Magacyada sharci darrada ah ayaa noloshooda xukuma iyada oo aan loo eegin sida ay wax yihiin. Meeshii hore ee aan waxba galabsan taabanayn qaybta aad jeceshahay waqtiga cuntada fudud ee xanaanada, archetype sharci darrada ah wuxuu ka codsanayaa qaybta aad ka jaray fasallada dugsiga sare. Dhisida cibaado soo socota sida Apple waa hadafka ugu dambeeya ee astaan ​​sharci-darro ah. Xusuusnow xayeysiisyadii hore ee iPod-ka ee dadka monochrome ay ku lahaayeen waqtiyadii ugu fiicnaa noloshooda qoob-ka-ciyaarka? Xayeysiintaasi kuma sheegeyso inaad istaagto dadweyne ama aad tagto riwaayad. Waxay kuu sheegaysaa inaad tahay naftaada, aad dheesho markasta oo aad jeceshahay, oo aad la sameyso Apple.Haddii aad u malaynayso in Apple uusan lahayn dhaqan soo socda, tixgeli tan. Dadku saf miyay ku sugayeen saacado markii Galaxy S7 la sii daayay? Maya, waa jawaabtu.
JESTER wuxuu ku nool yahay xilligan - Jester wuxuu ku saabsan yahay baashaal. Calaamadaha Jester ma daaweyn karaan cudurrada, laakiin waxay ka dhigayaan maalintaada mid wanaagsan. Kaftan, nacasnimo, xitaa macno darro dhammaantood waxay ku jiraan xirmada jester. Ujeedada calaamadda jester waa inay kaa dhigto inaad ku dhoolla caddeyso madadaalo qalbi fudud. The Old Spice Man waa mid ka mid ah waqtiyada aan jecel yahay ololaha xayeysiinta iyo tusaalaha ugu fiican ee jester archetype. Ragga qaarkood waxay si fiican uga falceliyaan sumcadda ragga iyo dumarka. Ragga kale maahan. Adoo kaftan ka sameynaya magacyadan ragga ah, Old Spice wuxuu rafcaan u dirayaa labada dhinac.
JACAYLku wuxuu rabaa inuu kaa dhigo kuwooda - Dareenka, raaxada, iyo dareenka ayaa ah ereyada muhiimka ah ee qofka jecel. Nooc jacayl jecel ayaa kaa raba inaad la wadaagto iyaga waqtiyada dhow ee noloshaada. Maxaad u iibsataa si aad ugu dabaal degto? Maxaad ku iibsataa waxyaabaha kale ee muhiimka kuu ah maalmaha dhalashada iyo sannad-guurada? Fursaduhu waa, waxaad ka iibsaneysaa nooc jacayl ah. Ka fikir xayeysiiska Shukulaatada Godiva. Weligood miyay kaa dhigayaan inaad ka fikirto caafimaadkaaga, dhaqaalahaaga, ama mustaqbalkaaga? Maya. Godiva way ku sasabaneysaa. Waxay muujinaysaa hodantinimadeeda iyo kareemkeeda. Waxay kugu martiqaadeysaa inaad kaqeybqaadato raaxeysiga ugu weyn nolosha: Shukulaatada.
Khabiirku wuxuu doonayaa inuu xoroodo - Xorriyadda dhammaantood waa sahamiyayaal daneeya. Halka noocyada kale ay isku dayi karaan inay kaa caawiyaan inaad guri dhisto, noocyada sahamiyayaashu waxay rabaan inay dibadda kaa keenaan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxay macno u tahay in noocyo badan oo banaanka ah ay yihiin kuwo dabiici ah oo loogu talagalay sahaminta qadiimiga ah. Subaru waa astaanta Explorer-ka caadiga ah. Ma iibiyaan gawaaridooda iyagoo ku saleynaya raaxada ama raaxada; waxay ku nuuxnuuxsadaan xorriyadda uu Subaru bixiyo. Dhib malahan. Subaru wuxuu kuu ogolaanayaa inaad go aansato halkaad usocto, duruuf kastoo jirta. Xor ayaad tahay
RULER wuxuu rabaa awood buuxda - Raaxada iyo gaar ahaanshuhu waa waxa taliyuhu ku saabsan yahay. Nooca xukunka waa iridjooge. Haddii macaamilku wax ka iibsado, waxay ka mid noqonayaan kuwa waaweyn. In loo arko mid tayo sare leh oo qaali ah ayaa muhiim u ah astaanta xukunka. Dahabka iyo gawaarida dhamaadka-sare waa kuwo dabiici ah oo loogu talagalay taliyihii hore. Miyaad iibsataa Mercedes Benz sababtoo ah qiimeynta tijaabada shilalka? Ka waran masaafaddiisa gaaska? Kuraasta kululaan? Maya. Waxaad iibsaneysaa Mercedes-Benz maxaa yeelay waad awoodi kartaa, dadka badankoodana ma awoodaan. Markasta oo aad dhigatid gaarigaaga, dadku way fahmi doonaan xaaladdaada adigoon erey oran. Qiimahaas aamusnaanta la fahmay ayaa ah waxa ay iibiso sumadda taliye.
DARYEELAHA ayaa raba inuu ku barbaariyo - Daryeelaha waa mid naxariis badan. Waxay rabaan inay halkaas u joogaan adiga iyo dadka aad jeceshahay. Noocyada daryeel bixiyaashu waxay ku saabsan yihiin diirimaad iyo kalsooni. Waad ku tiirsan kartaa iyaga markay tahay carruurtaada. Waa dhif iyo naadir in la arko nooc daryeel bixiye ah oo xayeysiinaya oo xabad ku ridaya tartankooda. Waxay ka soo horjeedaan iska hor imaad. Qadka safka Johnson & Johnson waa Johnson & Johnson: Shirkad Qoys. Kuma heli kartid ballanqaad dheeraad ah qoysaska intaas ka badan. Xayeysiinta Johnson & Johnson waxay had iyo jeer diiradda saaraan sida ay alaabadoodu kaaga caawiso inaad daryeesho carruurtaada. Sida wax soo saarkoodu u dhisaan qoysaska. Tani waa rooti-iyo-subag loogu talagalay daryeel-bixiye qadiimiga ah.
GEESIGU wuxuu doonayaa inuu is caddeeyo - Geesigu adduunka ayuu wanaajiyaa isagoo ugu fiican. Summad halyeey ah ayaan dan ka lahayn naas-nuujintaada; waxay xiiseynayaan inay kula tartamaan. Haddii aad rabto inaad u kacdo munaasabadda, waxaad u baahan doontaa caawimaad geesinimo. Ciidanka Mareykanka waa tusaalaha ugu dambeeya ee halyeeyga taariikhda.Waxaad ka fikirtaa xayeysiisyada shaqaalaysiinta ee aad aragtay iyadoo ciidamadu ka boodayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca, iyagoo ku dhex socda koorsooyin tababar, iyo ilaalinta dalka. Mid ka mid ah taas ayaa u eg maalin-ka-maalin? Dabcan maya. Looma maleyneynin. Waxaa loogu talagalay in lagugu qasbo jawaabta wicitaanka oo u kac munaasabadda adoo ku biiraya magaca halyeeyga: Ciidanka Mareykanka.
GUYADA GUUD / GABAR waxay rabtaa inay lahaato - Ma jiro wax dhalaalaya ama soo jiidasho, waa uun wax soo saar la isku halleyn karo oo shaqada lagu dhammeeyo. Taasi waa waxa caanka ah ee caanka ah ee gabadha / gabadha ahi ay iibinayaan. Nooca qadiimiga ah wuxuu diiradda saarayaa inuu bixiyo wax ilaa iyo hadda laga fog yahay is yeelyeelnimada oo qof walba rafcaan u noqon kara. Waa nooca qadiimiga ah ee ugu adag in laga baxo maxaa yeelay waa inaad haysataa badeecad rafcaan ka qaadanaysa tirada dadka. Qof walba wuu cabayaa kafeega. Ma ahan qof walba, laakiin waa tirakoob kasta oo weyn marka laga reebo dhallaanka. Taasi waa waxa ka dhigaya Folgers inay yihiin magac weyn oo gabar ama gabar ah. Aqal-galiyayaashu uma suuq galeynayaan sinta. Kama faanayaan tayada sare, kafee dhan-dabiici ah. Way ka dhigayaan mid fudud: “Qaybta ugu fiican ee soo kicinta waa Feejarka ku jira koobkaaga.” Qof kastaa wuu toosaa. Qof kastaa wuxuu cabayaa Folgers.
ABUURKU wuxuu jecel yahay kaamilnimada - Abuuraha kama walwalayo qiimaha wax soo saarka ama wax u sameynta miisaanka. Waxay dan ka leeyihiin hal shay: dhismaha sheyga ugu fiican. Halka sixirroolaha uu sidoo kale carabka ku adkeeyo aragtida iyo mala awaalka, hal abuurayaashu way ka duwan yihiin in aysan fureynin sixirka aduunka ayna abuuraan wax aan macquul aheyn. Waxay abuuraan sheyga ugu fiican. Lego waa tusaale weyn oo ah abuure archetype. Mid ka mid ah xayeysiisyadooda, Lego wuxuu dib u soo saaray si faahfaahsan oo cajiib ah indhaha ugu caansan adduunka. Iyagu ma dhisin goobo cusub, mana aysan abuurin tiknoolajiyad cusub oo gurigaaga gelinaya bogagga. Lego wuxuu adeegsaday teknolojiyadda ugu fudud ee suurtogalka ah: baloogyo. Waxay qaateen fudeydkan waxayna ku riixeen heerkiisii ​​ugu sareeyay. Taasi waa waxa abuure u yahay.
Marka, waa maxay taariikhda qadiimiga ahi?
Laga soo bilaabo waayo-aragnimo tobanaan sano ah, waxaan kuu sheegi karaa shirkad kasta inay miiska timaado iyada oo loo maleynayo inay yihiin wiil / gabar kasta, laakiin kiisaska 99%, maahan. Hoos udhaca waxa ka dhigaya astaantaada mid gaar ah iyo sida ugu wanaagsan ee macaamiishaadu ugu xirmaan alaabadaada ma sahlana, laakiin waa waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto si aad u fahamto waxa qadiimiga ah ee ay tahay inaad isticmaasho.
Tags: noocyada qadiimiga ahbrandaqoonsiga astaantaxannaaneeyahaabuurahaDisneyadduunka disneyraadiyegeesigaqof aan waxba galabsancaajisloverboqortooyada sixirsaaxirsharci darro ahcaadiga ahtaliyeSage